Homeसमाचारमुस्लिम गायक अलिफ खान र बिष्णु माझीको आ’वाजमा पहिलो गीत ‘तिम्रो खबर’ सार्जबनिक ( भिडियो हेर्नु’होस)
February 12, 2021 admin समाचार 7103
लोकप्रिय गायिका बिष्णु माझि र अहिलेका भा’इरल गायक अलिफ खानको सुम’धुर आवाजमा प्रति’भाशाली कलाकार गणेश खनालको शब्द संकलनमा बहुप्रतिभाका धनि कुसुम भण्डारीको लय सि’र्जनामा भाइरल गायक अलिफ खानको लोक दोहोरि एल्बम तिम्रो खबर सा’र्बजनिक भयको छ।
भिडियो तर्फ लोकेन्द्र शाहले निर्दे’शन गरेका छन् भने दिपक श्रेष्ठले उक्त गीतको छा’यांकन गरेका छन् र योगेश शाह ले भिडियो सम्पादन गरेका छन्। उक्त गीतमा राजु र स्मृतिको अ’भिनय रहेको छ।
उक्त भिडियो आस्था कला केन्द्र’ले निर्माण गरेको छ। उक्त लोक दोहोरि गीत’लाई सलिना म्युजिकको आधिकारिक युटुब च्या’नल मार्फत बजारमा सार्ब’जनिक गरियको छ।
जुम्ल्याहा जोडी गंगा जमुना: अचम्मको प्रतिभा, अहिले सम्मका जोडी भन्दा फरक (भिडियो सहित)
February 1, 2021 admin समाचार 6912
आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ?
March 17, 2021 admin समाचार 5019
केही दिनय’तादेखि बढीरहेको सुनको मूल्य बुधबार पनि बढेको छ । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति’तोला ३ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महा’संघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ८६ हजार
March 8, 2021 admin समाचार 6565
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243729)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231279)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (229312)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228129)